Awood koronto oo la hagaajin karo: waa maxay, sidee u shaqaysaa, maxay u tahay | Qalab bilaash ah
Isaac | 14/09/2021 09:00 | Qaybaha elektarooniga ah
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan oo loo baahan yahay istuudiyaha elektiroonigga ama aqoon isweydaarsi kasta waa a korontada iftiimin karta. Adigu waxaad ku quudin kartaa dhammaan noocyada wareegyada, adoo awood u leh inaad adeegsato danabyo kala duwan iyo xoojinno si fudud loo habeeyo. Markaa waad illoobi kartaa kuwa kale baytariyada ama adaporka gaar u ah wareeg kasta.
Una korantada caalami ah dhammaan mashaariicdaada. Sidoo kale, ma aha oo kaliya inay u adeegto korantada wareegga, waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa aalad tijaabo ah, maadaama aad awoodi doonto inaad aragto haddii a componente ama wareeggu si fiican buu u shaqeeyaa markaad taabato talooyinka baadhitaannadiisa ...
1 Waa maxay sahayda korontada oo la dumin karo?
1.1 Sida loo doorto xaraf wanaagsan oo la duri karo
2 Sahayda korontada oo sii iftiimaya
Waa maxay sahayda korontada oo la dumin karo?
Waxa ku saabsan korontada, iyo mabaadi'da hawlgalka, waxaan hore uga faalloonnay balooggan. Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaado a korontada iftiimin karta, Waxay leedahay farqi yar oo kuwa caadiga ah.
Awood koronto waa aalad awood u siineysa tamar koronto wareegga ama qeyb. Hagaag, markaad ka hadlaysid il dabool leh, waa mid ka mid ah danabyada waxaa lagu hagaajin karaa tiro go'an, iyo xitaa durdurrada. Markaa ma yeelan doontid wax soo saar go'an oo ah 3v3, 5v, 12v, iwm, laakiin waxaad dooran kartaa awoodda aad u baahan tahay.
Sida loo doorto xaraf wanaagsan oo la duri karo
Si aad u dooratid koronto si fiican u iftiimaya, waa inaad ka soo qaybgashaa dhowr arrimood oo waa inaad tixgelisaa. Markaa waxaad soo iibsan kartaa badeecada ku habboon baahiyahaaga:
Miisaaniyadda: waxa ugu horreeya ayaa ah in la go'aamiyo inta lacag ah ee aad rabto inaad ku bixiso korantadaada la hagaajin karo, maadaama sidan aad u aadi karto noocyo gaar ah oo moodooyin ah oo aad baabi'in karto wax kasta oo ka baxsan fursadahaaga.
BaahiyahaWaxa ku xiga ayaa ah in la go'aamiyo waxa aad u adeegsan doontid korontada mugdiga leh, haddii ay tahay kuwa sameeya marmar ama mashaariicda DIY, ama haddii ay tahay shaybaar xirfadeed oo dheeraad ah, si loogu adeegsado aqoon -isweydaarsiga elektaroonigga, iwm. Tani waxay sidoo kale go'aamin doontaa haddii aad u baahan tahay wax lagu kalsoonaan karo oo qaali ah, ama haddii aad ku qanci karto mid fudud.
Marca: waxaa jira dhowr summadood oo ka sarreeya inta kale. Laakiin waa inaadan sidoo kale ku mashquulin. Had iyo jeer, haddii ay tahay summad aad loo yaqaan, waxaad yeelan doontaa dammaanad-qaadyo badan oo tayo leh iyo taageero wanaagsan haddii wax dhacaan.
Sifooyinka farsamada: Tani waa mid shaqsiyeed, waxayna ku xirnaan doontaa waxaad raadineyso. Laakiin ka feker inta kala duwan ee danabyada iyo mawjadaha aad caadiyan u baahan tahay, si aad ugu habboonaato taas. Awoodda la taageeray (W) ayaa iyana muhiim noqon doonta.
Sahayda korontada oo sii iftiimaya
Haddii aad raadineyso awood koronto oo wax -dhimmi karta, halkan waxaad ku arki kartaa qaar ka mid ah moodooyinka iyo sumadaha ugu talinta badan:
PeakTech 1525: waa astaan ​​aad loo isku halleyn karo oo awood badan leh oo ah sahayda korontada oo la dumin karo. Qaabkani wuxuu ka socon karaa 1-16 volts ee tooska tooska ah, iyo 0-40A xoog ahaan, in kasta oo ay jiraan moodooyin kale oo qaali ah oo gaari kara 60A. Waxay leedahay shaashad LED ah oo aad ka akhrisan karto danabyada hadda jira iyo qiimayaasha hadda jira, iyo sidoo kale nidaamka qaboojinta caqliga leh ee isticmaalaya taageerayaasha, iyo 3 hore oo suurtogal ah.
Baugger Wanptek Nps1203W. Iyada oo leh muuqaal dhijitaal ah si aad u awooddo inaad si sax ah u aragto qiyamka la keenay, cabbirka is haysta, nabdoon, iyo kontaroolada gacanta ee fudud.
Furaha COODEN: waa koronto fudud oo la isku hagaajin karo oo ku habboon isticmaalka guriga ee hiwaayadda iyo shaybaarrada, iyo xitaa xarumaha waxbarashada. Waxaa ka mid ah bandhig dhijitaal ah si loo arko qiyamka sahayda, waxaana laga nidaamin karaa 0-30 volts iyo 0-10 amps of current current.
Uniroi DC: Ilahaani wuxuu oggolaanayaa hagaajin laga bilaabo 0 illaa 32 volts, iyo 0 illaa 10.2 amps. Iyada oo si sax ah loo hagaajin karo oo ah 0.01v iyo 0.001A. Iyada oo leh soo -bandhig ballaaran oo LED ah, xakameyn heerkulka caqliga leh, aadna loogu kalsoonaan karo.
RockSeed RS305P: koronto la hagaajin karo oo leh awood wax-ka-beddel oo ah 0-30V, iyo 0-5A. Iyada oo leh 4-lambar, 6-dhigay bandhigga LED-ka, dejimaha horumarsan, xusuusta, iyo kartida lagu xiro PC-ga iyada oo la adeegsanayo fiilada USB-ga si loogu dhex-dhexaadiyo barnaamijyada Windows-kaliya ku habboon.
Hanmatek HM305: xaraf la mid ah kii hore, oo leh cabbir aad u yar, fudud oo raqiis ah. Waxaa ku jira shaashadda LED si aad u aragto qiimayaasha hadda iyo kuwa danab. Waxay u oggolaaneysaa isku-hagaajin fudud oo danab u dhexeeya 0-30V iyo kan hadda u dhexeeya 0-5A. Waxaa jira kala duwanaansho kale oo gaari kara ilaa 10A.
Kaiweets cc. Waxay ka socon kartaa 0 ilaa 30V iyo 0 ilaa 10A. Waxa kale oo ay leedahay muuqaal LED ah iyo deked USB ah oo 5v / 2A ah.
EventekWaa mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee sahayda korontada ee la dumin karo, qiimaheeduna waa mid soo jiidasho leh. Qaabkani wuxuu u oggolaanayaa sharciyeynta 0 illaa 30 volts, iyo 0 illaa 10 amps. Iyada oo leh 4-lambar oo weyn oo LED ah, cabbir is haysta, aad loogu kalsoonaan karo oo ammaan ah, oo ay ku jiraan fiilooyinka xarkaha / khadadka imtixaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » Awood koronto oo la hagaajin karo: maxay tahay, sidee u shaqaysaa, maxaa loogu talagalay